Iceweasle Mobile a ndụdụ nke Fenix ​​nke na-ebilite site na ndị na-abụghị ndị na-agbanwe agbanwe | Site na Linux
Ọchịchịrị | | android, Aplicaciones
Ndị mmepe Mozilla agwụla ọma Mbugharị Firefox 68 maka ndị ọrụ gam akporo na ihe nchọgharị ọhụrụ ahụ nke ọrụ Fenix ​​mepụtara, nke a na-enye ndị ọrụ niile n'oge na-adịbeghị anya dịka mmelite "Firefox 79.0.5".
Nyere nke a, ndị nwere mmasị na-ekwenyeghi na mgbanwe na Firefox ọhụrụ maka gam akporo nwere ntọala ọrụ mmekọrịta nke ndụdụ ahụ: Iceweasle Ekwentị, nke na-ezube ịnye nhọrọ dị elu iji hazie ma gosipụta ozi ndị ọzọ gbasara ibe ndị elere anya.
Ewezuga aha, eIhe oru ngo a enweghi ihe jikọrọ ya na ndụdụ Iceweasel zigara na Debian ma mepụta otu ndị iche.
Iceweasle Mobile laghachiri ohere banyere: ntọala ntọala (Na Fenix ​​peeji a nwere nkwarụ na ndabara).
Na mgbakwunye na atụmatụ ụfọdụ nke ochie Firefox maka gam akporo ndị na-adịghị na Fenix: nlele koodu peeji, ntọala peeji nke obibi, kọmpat kọmpụ, zipụ taabụ na ngwaọrụ ọzọ, taabụ kwụ n'ahịrị, ndepụta nke taabụ emechiri emechi, adreesị mmanya mgbe niile na ọnọdụ ele (na-arụ ọrụ mgbe niile na Fenix ​​autohide), chekwaa peeji ahụ na PDF.
Ọzọkwa Enwere mgbanwe na plugins ndị a na-akwado na Fenix, e guzobere ntinye nke plugins ndị ọzọ na ndụdụ ahụ; N'ihi ojiji nke ngwa gam akporo nke Mozilla, ọtụtụ plugins agaghị enwe ike ịrụ ọrụ na-enweghị imegharị ọrụ, mana ndị ọrụ nwere ohere ịnwale ịwụnye ngwa mgbakwunye ọ bụla na-enweghị oke ịmachi ndepụta ha.
Ebe ọ bụ na Fenix ​​ha na-akwado naanị plugins ndị a: uBlock Origin, Reader Dark, Badger Privacy, NoScript, HTTPS Ebe ọ bụla, Decentraleyes, Chọọ site na Image, YouTube High Definition and Privacy Possum.
Ọzọkwa, taabụ ịgbanwee taabụ na Emegharịrị Iceweasle Mobile ka ọ dị ka nke ochie Firefox maka gam akporo. N'ime atụmatụ maka ọdịnihu, ọrụ iji gbanyụọ telemetry na koodu ọnụọgụ pụtara ìhè.
Ugbu a, anyị kwenyere na ekwesighi izipu telemetry na Mozilla, mana anyị enweghị ike ịkwado nke a; enwere ike izipu data. Ọ bụrụ na ọ chọpụta na ngwa ahụ ezigara data na Mozilla, Gbanwee, Leanplum, Firebase ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ yiri ya. Ọ ga-abụ na iwu ahụ ruru Mozilla bụ iwu nzuzo nke Mozilla, mana ebe ọ bụ na Iceweasel Mobile abụghị, ọzọ, ngwaahịa Mozilla , anyị enweghị ike ikwe nkwa.
Iceweasel Mobile jikọtara ike nke Fenix ​​na mmụọ nke Fennec, jiri nkwanye ugwu kwanyere nnukwu ọdịnala nke Netscape Navigator, ebe ọrụ niile sitere na Gecko sitere, gụnyere nke ochie nke ndị bu anyị ụzọ, ndị ochie. Mozilla Phoenix na Mozilla Firefox desktọọpụ nchọgharị.
Nke atụmatụ ndị fọdụrụ nke Firefox ọhụrụ ahụ n'ihi na gam akporo (Fenix)
Ndi ọchịchịrị layout mode, ndabere adreesị mmanya na-ebufe na ala nke ihuenyo na a ohuru mmapụta ngọngọ maka ịmafe n'etiti oghe taabụ (taabụ tree).
-Kpụrụ onyonyo, nke na-enye gị ohere igwu vidiyo na obere windo mgbe ị na-elele ọdịnaya ndị ọzọ ma ọ bụ mgbe ị na-arụ ọrụ na ngwa ọzọ.
Advanced nchedo ngagharị nsuso, nke na-enye ohere, igbochi mgbasa ozi na koodu nsuso ngagharị, ọnụ ọgụgụ nchịkọta weebụ, wijetị mgbasa ozi mmekọrịta, ụzọ njirimara njirimara onye zoro ezo na koodu maka igwu egwu cryptocurrency.
Ogwe adreesị arụmọrụ, Ọ nwere bọtịnụ ụwa maka arụmọrụ ngwa ngwa dị ka izipu njikọ na ngwaọrụ ọzọ na ịgbakwunye saịtị na ndepụta ndị ọkacha mmasị.
Ike ijikọ taabụ na nchịkọta, na-enye gị ohere ịchekwa, otu na ịkekọrịta saịtị ọkacha mmasị gị. Mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị, taabụ ndị ka na-emeghe na-akpaghị aka na nchịkọta nke ị nwere ike ịlele ma weghachite ma emesịa.
Nweta Iceweasle Mobile
N'ikpeazụ maka ndị nwere mmasị ịnwale ma wụnye ihe nchọgharị a, ha nwere ike ịga na njikọ ndị a, ebe i nwere ike ịchọta njikọ na-enye mkpokọta kachasị ọhụrụ dị (apk) iji wụnye na ngwaọrụ gam akporo gị.
N'otu njikọ ahụ ị ga-ahụ koodu isi mmalite maka ndị nwere mmasị ịmara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Iceweasle Mobile a ndụdụ nke Fenix ​​na-ebilite site nonconformists
Akpaaka: Ngwaọrụ dị maka ọrụ nke SysAdmin